Izinhlayiya zeColloidal, okungekho lula ukuzixazulula ngokwemvelo emanzini angcolile. -Izimboni izindaba-I-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd
Izinhlayiya ze-Colloidal, okungekho lula ukuzixazulula ngokwemvelo emanzini amdaka.
Isikhathi: 2020-06-12 Hits: 33
Kungani izinhlayiya ze-colloidal emanzini amdaka kungabi lula ukuzixazulula ngokwemvelo?
Emanzini angcolile, izinto eziningi ezinamandla adonsela phansi angaphezu kwe-1 zingasuswa ngokudilizwa kwendalo, i-centrifugation kanye nezinye izindlela. Isibonelo, ama-solids amisiwe, izinhlayiya ezinkulu, nezinsimbi ezimisiwe okulula ukuzixazulula.
Kodwa-ke, kunzima ukuthi izinhlayiya zemvelo zixazulule ngokwemvelo uma izinhlayiya ezilengisiwe ezinamandla athile adonsela phansi okungaphansi koku-1 zincane noma zingabonakali ngamehlo enyama.
Kunezizathu ezimbili eziyinhloko zokuxazululwa kancane:
(1) Ngokuvamile, izinhlayiya ze-colloidal zonke zinecala elibi. Ngoba baxoshwa abobulili obufanayo, bangavimbela izinhlayiya ze-colloidal ukuthi zixhumane futhi aziboshelwe komunye, ngakho-ke zimisiwe emanzini.
(2) Kukhona futhi ungqimba lwama-molecule ebusweni bezinhlayiya ze-colloidal azungeze ngokuqinile. Lolu ungqimba lwe-hydration luphinde luphazamise futhi luhlukanise ukuxhumana phakathi kwezinhlayiya ze-colloidal, ukuze lungakwazi ukunamathela komunye nomunye, bese lumiswa emanzini.
Okwedlule: Obunye Ubuchwepheshe Bemithi Yokwelashwa Kwezilwane Ezivamile eTshayina
Okulandelayo: Ungakusebenzisa kanjani ukuphathwa kwezesayensi kwezemvelo?